Ihe omimi di iche iche Brocken, ihe omuma ihe omuma | Network Meteorology
Ihe omimi di iche iche Brocken, ihe omuma ihe omuma
Ka anyanwụ na-ada, ihe nkuku nke na-eme ka ìhè na-esote elu na-agbago 180º, iji mee ka ọ dị. Ọ bụrụ na anyị ahụ onyinyo anyị, anyị ga-ahụ etu o si abawanye ogologo, ma ọ bụrụ na ihu ya dị larịị ma anyị enweghị ihe mgbochi na-egbochi silhouette anyị, onyinyo ahụ nwere ike ịgbatị ogologo oge. Ihe omuma nke Brocken dabere na ụkpụrụ a ma na enwere ikuku, aha ya bụ Mount Brocken 1142 mita n'elu oke osimiri n’Ugwu Harz, Germany.
Ndị ugwu ahụ bịara ebe ahụ nwere ike ịhụ mgbe anyanwụ dara, na-ahapụ Anyanwụ n'azụ ha, ogologo silhouette ya na-atụgharị na alụlụ ahụ, bụ nke a na-ahụkarị. Oge ụfọdụ, n’ile anya n’ebe dị anya, ụzarị nke Anyanwụ na-achapụta agba nke egwurugwu. Halo bụ ihe nkiri Brocken.
Gịnị mere o ji achọ ịmata ihe?
Maka ụdịdị dị iche iche nke Brocken nwere ike ọ bụ naanị onye nyere onyinyo ahụ. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ndị ọzọ esoro gị gaa, naanị onye a na-atụ aro onyinyo ya ga-ahụ ya. Yabụ, ọ bụrụ na onye ọ bụla dị njikere ịhụ ndo ha, ị ga-ahụ naanị agba agba ha na ndò ndị ọzọ nke ndị ibe ahụ gosipụtara n'igirigi ahụ na enweghị ihe ọ bụla. Uzo ozo nke so ya bu na odi ka obu ihe ekpuchiri aru. Ebe ọ bụ na onyinyo gosipụtara n'igirigi, silhouette mmadụ apụtaghị na ọ dinara ala, mana na ụzọ adịghị ọcha na-eguzo.
A ga - ahụ ụdịdị dị iche iche, ọbụlagodi na inwe mmalite ya na Brocken n'ebe ndị ọzọ. N’oge ochie, ihe ịtụnanya a abụghị naanị ngwa anya. Halos ma ọ bụ areolas dị gburugburu ahụ ma ọ bụ isi dị ka ụdị ihe ịrịba ama nke Chineke na-ahọrọ onye ahụ maka nzube pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Ihe omimi di iche iche Brocken, ihe omuma ihe omuma
Ba ụba ikuku CO2 ga-eme ka udu mmiri North America daa mbà